Cyril Ramaphosa to meet Zimbabwe's Emmerson Mnangagwa on Tuesday
10 March 2019 - 14:59 By timeslive
Zimbabwe's president Emmerson Mnangagwa delivers a speech as he visits the Russian diamond producer Alrosa in Moscow, Russia, on January 14 2019. President Cyril Ramaphosa will meet his Zimbabwean counterpart on Tuesday.
Zimbabwe - described as one of SA's top trading partners on the continent - will host a meeting between presidents Cyril Ramaphosa and Emmerson Mnangagwa on Tuesday.
The SA president's office said Ramaphosa will travel to Harare to co-chair the third session of the Bi-National Commission, following a meeting between senior officials from both countries last week.
The presidency said: "Trade co-operation between the two countries is at a high level to the extent that SA exports to Zimbabwe in 2018 amounted to approximately R30.8bn, while imports from Zimbabwe amounted to approximately R3.6bn, thus placing Zimbabwe among SA's top trading partners on the continent."
"SA and Zimbabwe have good bilateral political, economic and social relations underpinned by strong historical ties dating back from the years of the liberation struggle."
The begging bowl will be out when South African President Cyril Ramaphosa arrives in Harare on Tuesday for the annual meeting of the SA-Zimbabwe ...
SA banks will no longer supply Zimbabwe with dollars
It is usually depositors who find it hard to get US dollars from banks, resulting in long, winding queues outside branches